Olee otú Pnye ọnụahịa Online nwere ike imetụta yingzụ Àgwà | Martech Zone
Ihe omumu banyere azumazu ahia bu ihe itunanya. Abụ m onye na-azụ ahịa n'ịntanetị ma na-atụkarị m anya na ihe niile m zụtara na achọghị m n'ezie mana ọ dị oke mma ma ọ bụ na ọ dị oke mma ịgafe! Ihe omuma a sitere na Wikibuy, 13 Psychological ricnye ọnụahịa Hacks Dịkwuo Sales, na-akọwa mmetụta ọnụahịa na otu esi azụta omume nwere ike ịdị nfe na obere obere tweaks.
Nye ọnụahịa psychological bụ irè ahịa-ịnya ụgbọ ala atụmatụ maka ulo oru. Site na ịbanye na akparamaagwa mmadụ na otu ndị ahịa si achọpụta ọnụ ahịa na uru, azụmaahịa na-enwe ike ịkwụ ụgwọ ngwaahịa karịa nke na-adọrọ adọrọ ma metụta mkpebi mkpebi. Na mgbakwunye na usoro ọnụego emeziri, na-enye ọnụahịa mbelata, onyinye BOGO, na Kupọns bụ ụzọ ọzọ akwadoro iji metụta ahịa.
Ekwela ka okwu a ịnye ọnụahịa psychological na hacks gbanyụọ gị. Nke bụ eziokwu bụ, kemgbe ọtụtụ afọ anyị gụrụ akwụkwọ na ndị ọrụ ntanetị na ihe ha ga-achọ nke ukwuu na ndị asọmpi anyị na-adabere n'ụzọ ndị a n'ụzọ dị mkpa. Ezie na ị nwere ike iche na nke a bụ iji aka arụ ọrụ, ọ bụ ma ezigbo ọrụ na omume kacha mma optimizing gị ịnye ọnụahịa online.
Gịnị bụ Anchoring?
Ijigide ngwaahịa bụ atụmatụ ebe enyere onye na-azụ ya ngwa ngwa ma ọ bụ ntanye ọnụahịa iji tụlee mkpebi ịzụta ha.
Kedu ihe bụ ọnụahịa amara na aka ekpe?
Mgbe ị na-agụ ọnụahịa, enwere usoro a maara dị ka ekpe digit mmetụta ebe ndị ahịa na-etinye nlebara anya na ọnụ ọgụgụ aka ekpe na ọnụahịa. Ya mere, a price dị ka $ 19.99 n'echiche yiri ka nso $ 10 karịa $ 20. A maara nke a dị ka ọnụ ahịa amara.
Gịnị bụ ukwu Pnye ọnụahịa?
Chịkọta ngwaahịa ndị dị mkpa na otu, azụta ego amara dị ka ọnụahịa dị nro. A na-ejikarị ya eme ihe iji kpochapụ ihe ndị nwere oke ego anaghị erekwa.
Ndị a bụ ụzọ njikarịcha ọnụahịa 13:
Display ịnye ọnụahịa na obere Akara ókwú n'ihi ya, ha na-aghọta na-nta ahịa.
Gosi adịchaghị nhọrọ mbụ ya mere nke abuo yiri ka o buru ahia.
Iji ịnye ọnụahịa ngwugwu iji mee ka ndị ahịa kwenye na ha na-azụ ahịa dị oke ọnụ ahịa na mbelata ego maka ọtụtụ ihe.
Wepu rikoma si ahịa nke mere na ha na-aghọta ka ala ahịa.
Nye ndị ahịa otu nhọrọ kwụọ ụgwọ na nkeji ya mere ha na-agbanye echiche ha n’aka ntakịrị ego.
enye ihe atọ dị iche iche ya na nke ichoro ka ha zụta n’etiti.
ọnọdụ ọnụ ala dị n'aka ekpe ịgbaso usoro echiche echiche ekpe-gaa-akanri na ọnụahịa.
Iji mechie ọnụ ọgụgụ maka ịzụrụ ihe mmetụta uche na ọnụ ọgụgụ na-abụghị nke okirikiri maka ịzụrụ ezi uche.
Ahịa si elu ka o guzo ọtọ ịgbaso ụkpụrụ echiche oke elu-ala na uru.
tinye ọdịiche anya site n'ịgbanwe font, nha, na agba nke ihe ire ma debe ya ntakịrị n'ihu site na ọnụahịa ndị ọzọ iji dọta uche.
Mgbe ị na-akwụ ọnụahịa, jiri okwu dịka obere na obere jikọta zụọ ya na a nta ịdị ukwuu.
Ọgwụgwụ ahịa na $ 9 ịgbanwe echiche nke ndị price na-nta.
Wepu akara dollar ịgbanwe echiche nke ọnụahịa ngwaahịa. Na nyocha nke Cornell, ndị na-azụ ahịa nọrọ 8% karịa mgbe ewepụrụ akara dollar
Tags: na-emechiịnye ọnụahịa ngwugwuọnụahịa amaraakara egoakara dollarecommerceekpe digit mmetụtaịnye ọnụahịangosipụta ngwaahịa